Torolàlana amin'ny fividianana iPhone fanindroany amin'ny Noely | Vaovao IPhone
Torolàlana amin'ny fividianana iPhone faharoa an-tanana amin'ity Krismasy ity
Fotoana fanomezana izao, aorian'ny alin'ny krisimasy dia manomboka ny fanisam-bato hatramin'ny alin'ny 5 ka hatramin'ny 6 janoary, rehefa manolotra fanomezana tena nandrasana indrindra ireo olon-kendry telo. Na dia tsy misy an'io karazana fanao ara-barotra io aza, ireo daty ireo no be mpitia indrindra amin'ny fividianana sy fivarotana vokatra elektronika. Satria, Tianay ny hanome anao toro-hevitra roa mba tsy hanaikitra amin'ny hosoka mety hitranga raha mividy fitaovana iPhone. Mba hanaovana izany, dia hanome toro-hevitra maromaro ianao izay tokony harahinao hatrany tsy an-kanavaka hividianana iPhone faharoa.
Ary tsy hoe mila mandositra ny "crooks" sy ny iPhones fotsiny isika amin'ny hetsika tsy ara-dalàna, matetika koa isika dia mila mandray an-tsaina ny tsy fahalalan'ny mpampiasa maro izay miteraka fikorontanana sy olana manaraka. Ho ahy ireto ny fitsipika lehibe indrindra rehefa mividy iPhone fanindroany:
Mitandrema amin'ny fepetra tonga lafatra: Ny vaovao dia tsy mitovy aminao toa ahy. Aza mandoa na inona na inona raha tsy mahita ny lesoka rehetra ary manitsy ny vidiny amin'izy ireo.
Safidy tsara ny soloina iPhone: Raha mahita iPhone "avy amin'ny fanoloana" na Refurbished ianao dia aza atokisany ny kalitaony, fitaovana vaovao izy ireo ary tsy dia ho reraka sy rovitra loatra.
Ilaina ny antoka: Zava-dehibe ny hahafantarana raha avy amin'ny Apple Store ny iPhone, amin'izay dia hanana antoka maharitra roa taona miaraka amin'i Apple izy. Raha manome avy amin'ny orinasa hafa na orinasa an-tariby ny iPhone dia tadidio fa tsy maintsy mandray ny faktiora ianao satria i Apple no mitaona ny taona voalohany, fa ny faharoa kosa tsy maintsy mandeha mivantana any amin'ny orinasa ianao ary tsy hanatrika anao izy ireo raha tsy misy ny faktiora momba ny fividianana.
Mitandrema amin'ny vidiny ambany loatra: Ny "bargains" amin'ireto karazana vokatra ireto dia tsy misy, raha toa ka manolotra iPhone 6 ho an'ny € 200 vaovao ianao dia misy saka mihidy ary aza mandoa vola mialoha.
Hamarino tsara fa tsy misy rohy ny iPhone avy amin'ny Apple ID an'ny mpampiasa izay mivarotra izany aminao, na raha tsy izany dia hanana olana amin'ny famerenana azy ianao. Toy izany koa, alao antoka fa vonona hapetraka ilay fitaovana fa tsy hangalatra na hihidy amin'ny iCloud.
Ny aftershocks no filaharan'ny androAlohan'ny hividianana azy dia manandrama mijery iPhone am-boalohany amin'ny antsipiriany, ny antsipiriany voalohany hanome azy dia ny fampiasana microUSB fa tsy Lightning. Saingy ny antsipiriany sy ny kalitaon'ny fitaovana, ary koa ny rindrambaiko, dia hanadio ny fisalasalanao.
Raha amidiny aminao tsy misy boaty sy kojakoja ireo, ny zavatra azo inoana indrindra dia ny fahitana fa manana fitondran-tena mampiahiahy ity fitaovana ity. Aza misalasala amin'ny fivarotana fitaovana tsy misy boaty na faktiora.
Mandosira ny iPhone "tsy misy afa-tsy amin'ny efijery vaky" izay "mora vidina": Ao amin'ny Apple Store ny fanamboarana ny efijery dia mitentina mihoatra ny € 100, ary matetika ny mpanome "antoko fahatelo" manamboatra izay manala ny Touch ID na mampiditra efijery diso izay manome olana. Mitandrema amin'ny efijery tapaka sy kilema madinidinika, mety ho lafo kokoa noho ny alika ny vozon'akanjo.
Tandremo ny maodely sy ny tsipiriany: Mora ny manodinkodina, ny iPhone 5s dia tsy mitovy amin'ny iPhone SE, satria afaka mijery ny silkscreen any aoriana isika, amin'ny maodely "S" farany hitanao io taratasy io, toy ny amin'ny iPhone SE ihany no hahitanao azy. tadiavo ireo litera roa ireo. Zava-dehibe ihany koa ny fandehanana any amin'ny sehatry ny telefaona ary hizaha raha manana ny tahiry nampanantenainy anay izy ireo alohan'ny andoavany vola, satria mety mandoa 64GB izahay ary mahazo 16GB.
Hamarino tsara fa tsy avy amin'ny fanamboarana SAT tsy nahazoan-dàlana ilay fitaovana. izany dia hanafoana ho azy ny fiantohana ary azo inoana fa hanana olana amin'ny asa ianao noho ireo faritra tsy nekena.
Ireto ny torohevitra fototra tokony ho fantatrao alohan'ny ividiananao fitaovana iPhone faharoa. Tandremo ny pilina azo apetraka manodidina an'i Wallapop ary mirary soa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Torolàlana amin'ny fividianana iPhone faharoa an-tanana amin'ity Krismasy ity
The Castaway Podcast Player, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Apple sy La Indian dia manomboka manamafy ny fifandraisan'ny orinasa